I-Sauna Studio 36ylvania/ Iflethi eneSauna + AC - I-Airbnb
I-Sauna Studio 36ylvania/ Iflethi eneSauna + AC
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAsko
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uAsko iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Isitudiyo esisandul 'ukulungiswa esiyi-36 m2 nendawo entle kakhulu nethuleyo. Zonke iinkonzo kunye neevenkile ezikumgama okufuphi xa uhamba ngeenyawo.
- 500m ukuya embindini wesixeko
ye-Savari 700M -Railway,- kunye nesikhululo sebhasi
esiyi-500M -U-Gym, i-ice rink, ipuli yokuqubha, umkhondo wezinja/umkhondo oqaqambileyo weekhilomitha eziyi-147
Iflethi inetreyini enamaqhwa eyi-7 m2. Indawo yokupaka yabucala enento eyenza kufudumale.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-36 ene-sauna yakho, ekwindawo ekhuselekileyo nethuleyo. Indawo yokupaka esimahla
- Kugqitywe ngo-2013, le flethi ikumgangatho osezantsi, inendawo yokungena engaphephekiyo nakwisitulo esinamavili (akukho zitepsi okanye iindawo eziphakamileyo). Iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-7 enetreyini enamaqhwa kwicala langokuhlwa elangeni, nenkqubo yokupholisa
*Indlu ekwicomplex eyakhiwe ngo-2013 ifumaneka kwizitrato, ngoko kulula ukuyifikelela nangona isitulo esinamavili okanye njl. (akukho zitepsi okanye amacango aphakamileyo). 7 m2 indawo enamaqhwa kwicala lokutshona kwelanga. Iflethi inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
-Ukulala i-alcove eneebhedi ezimbini ezilala umntu omnye negumbi lokuhlala elinesofa enye enokutshintshwa. Kuqukwe ilinen yebhedi.
* Iibhedi ezimbini ezibini kwi-alcove kunye nesofa eyi-1 kwigumbi lokuhlala. Izinto zebhedi nazo ziqukiwe
- ikhitshi eline-crockery, izinto zokupheka, ifriji/i-freezer, umatshini wokwenza ikofu neketile.
* Ikhitshi elincinci elihle elinezitya, izinto zasekhitshini, i-deep freezer/ifriji, umatshini wokwenza ikofu, iketile yombane.
-iTV -I-Wifi inokufunyanwa ukuba kuyimfuneko, nceda usazise
ukuba iyafuneka *I-Wifi ngesicelo
-Ukupaka izinto ezininzi ezineplagi yombane (yokufudumeza)
-Kukho nomatshini wokuhlamba impahla negumbi
lokomisa * Indawo yokuhlamba iimpahla kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke
-Ukucoca ngeyona ndlela kuqukiwe kwixabiso. Nangona kunjalo, iindwendwe zicelwa ukuba zihlambe izitya zazo zize zise inkunkuma kumgqomo wenkunkuma wesakhiwo:)
*Ukucoca emva kokuphuma kuqukiwe. Nokuba kunjalo, iindwendwe zicelwa ukuba zihlambe izitya zize zikhuphe inkunkuma:)
4.72 · Izimvo eziyi-57
-Iflethi isembindini weYlivieska kunye neSavari. Indawo yokuhlala ithule, icocekile kwaye ikhuselekile
*Ikwindawo entle, ekhuselekileyo nethuleyo kufutshane kakhulu neYlivieska centrum. Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kwinto yonke: iivenkile zokutyela, iibhari, iikhefi, iindawo zokubhaka, iimarike, iivenkile ezithengisa ukutya, ijimu njl...
Umbuki zindwendwe ngu- Asko
Sihlala kwinkampani yezindlu ekufutshane, ngoko siyafumaneka ukuba kuyimfuneko
*Sihlala kwindlu engummelwane, ngoko kulula ukuyifikelela ukuba kuyimfuneko